Ururka ONLF oo yeeshay hoggaan cusub | Somsoon
Home WARAR Ururka ONLF oo yeeshay hoggaan cusub
Shirweynaha ururka ONLF oo lagu qabtay magaalada Godey ee dhulka ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya hoos taga ayaa waxaa lagu doortay hoggaan cusub oo uu yeeshay ururka ONLF oo haatan u dilaacay xisbi siyaasadeed.
In ku dhow 600 oo Ergo ah ayaa ka qeyb gashay shirkaasi iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Ururkan oo muddo la dagaalamayey dowladda Itoobiya, hadana isku bedalay xisbi siyaasadeed ayaa waxaa xilka guddoomiyaha ku tartamay laba musharrax oo kala ahaa, Cabdiraxmaan Sheikh Maadeey iyo Axmed Yaasiin.
Maadeey oo ka mid ahaa aas aasayaashii ONLF ayaa loo doortay guddoomiyaha cusub ee ururkaasi, wuxuuna helay 340 cod, halka musaharraxa kale uu la yimid 251 cod, sida uu ugu dhawaaqay natiijada guddiga qabtay doorashadaas.
ONLF oo u dagaalami jirtay xoreynta dhulka Soomaali Galbeed ayaa sanadkii hore joojisay dagaalkii ay kula jirtay dowladda Itoobiya waxuuna ku dhawaaqay ururku nabad iyadoo dowladda Itoobiyana ay la qaadatay nabadda sidaasna waxaa ku bilaawaday in dhabaha loo jeexo heshiis nabadeed.
Arrintaasi ayaa waxa ay ku timid, kaddib heshiis ay la galeen xukuumaadda Ra’iisul wasaraaha Itoobiya, Abiye Axmed oo isbedal ballaaran ku sameeyey siyaasadda dalkaas.
Article horeShabakaddii Shabaab uga howlgali jirtay galbeedka Muqdisho oo Maxkamad lasoo taagay
Article socoda Weerar lagu dilay dad rayid ah oo ka dhacay gobolka Mudug